Kedu ihe kpatara ịkparịta ụka n'Networkntanet na Usoro Ọmụmụ Niile? | Martech Zone
Kedu ihe kpatara ịkparịta ụka n'Networkntanet na Usoro Ọmụmụ Niile?
N'ehihie a, a kpọrọ m ka m rie nri ehihie na mkparịta ụka dị egwu Analọ akwụkwọ azụmahịa Indiana Ụlọ akwụkwọ Harrison. A maara Indiana nke ọma maka inwe ụfọdụ ụlọ akwụkwọ kachasị mma na mba ahụ, yana ụwa, mana ndị ụlọ akwụkwọ na Harrison ghotara na anyị nọ ụwa na-agbanwe n'ike n'ike. Ha na-eme ihe ike ike iji hụ na ha ga-anọ n'ihu usoro ahụ.
Ka anyị na-ekwu okwu, achọpụtara m na e nwere otu ihe na-egbukepụ egbukepụ nke na-efu na usoro ọmụmụ ụmụ akwụkwọ n'oge a. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụ otu esi eme ya network (ya na nka na uzu). Imirikiti ụmụ akwụkwọ chọrọ ka ha gaa klaasị dị ka ikwu okwu n'ihu ọha n'oge ha gụsịrị akwụkwọ, mana ọ na-esiri ha ike ịkụziri ha mkpa na ike nke ịkparịta ụka.
Enwere m ezigbo ndị enyi m na-akwa ụta maka na ha agabeghị mmemme mpaghara ma nọrọ na njikọ n'etiti ndị isi gara aga ha na ha rụkọrọ ọrụ. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ha achọpụtala na ha apụkwaghị ìhè ma ugbu a ọ dị mkpa 'ịchụkwudo' iji nweta traction iji nweta ọrụ ma ọ bụ ohere ha na-achọ. Simply nweghị ike ịnweta oge ahụ azụ!
Imirikiti oge m nọrọ na mpụga ọrụ m bụ iji ịkparịta ụka n'.ntanet. IZIRingTA bụ # 2 na ndepụta m nke m si etinye oge m (# 1 na-arụ ọrụ nke ọma na ọrụ m dị ugbu a!). Mechie na # 3 na-achọta oge na ohere iji rụọ ọrụ na azụmaahịa ọhụrụ ma ọ bụ ọrụ akụkụ. Nke ahụ ziri ezi - m tinye ịkparịta ụka n'asntanet dị ka ihe ka mkpa karịa ịnweta ego nke abụọ!
Ihe kpatara ya dị mfe - ịkparịta ụka n'hasntanet emeela ka m nweta ọrụ mbụ m yana dugara m ohere niile. Enweghị netwọkụ ahụ, agaghị m anọ ebe m nọ - na agaghị m enwe ohere meghere m ịga ebe m ga-anọ.
IZIR isTA bụ Investment
IZIR isTA bụ ego. N'elu elu, ọ nwere ike ịdị gị ka ị na-etinye oge na ume ibute ndụmọdụ, ọrụ ma ọ bụ ịgbatị netwọkụ gị n'efu. Agbanyeghị, site na mmekọrịta ndị a ị na-enweta ntụkwasị obi nke ndị mmadụ ma na-eme ka ikike dịrị n'okwu a dị n'aka.
Dị ka ihe atụ, M were ụbọchị ezumike ọrụ taa. Ejiri m ụbọchị ahụ na-akparịta ụka ịkparịta ụka n'socialntanet Ụlọ akwụkwọ Harrison, na-agba izu BioCrossroads na-ewu ụlọ ha n'ịntanetị, na ịga otu Indiana entrepreneur Nzute Kọmitii na-ahụ maka nlekọta - niile site na mmekọrịta mmekọrịta m!
Ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ na-achọ ikwu okwu n'ihu ọha dị ka nkà achọrọ, ndị nkụzi ga-enyerịrị ịkparịta ụka n'itntanet nlebara anya nke ọma. Mụ akwụkwọ ga-gụrụ akwụkwọ na ịchọta ohere ịkparịta ụka n',ntanet, otu esi agbaso ma zụlite mmekọrịta ha na netwọk, na-azụlite ọnụnọ n'ịntanetị - yana otu esi enweta ego niile dị n'elu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike mejupụta usoro agụmakwụkwọ enyere na isiokwu a, m na-atụ anya ịhụ mahadum na kọleji na-emepe emepe nzụlite na isiokwu ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na nke a, nweere onwe gị kpọtụrụ m!
Tags: infographics isi mmalitelaura egburu
Thekọ Ohi Ọdịnaya na Adsense dị ka mmebi DMCA
De blọgụ maka azụmahịa: Usoro ọhụrụ maka nkịta ochie
Jul 21, 2008 na 9:16 PM
Mụ na ụmụ akwụkwọ MySpace na Facebook nọ n'ụzọ ụfọdụ na njedebe nke ịkparịta ụka n'socialntanet. Naanị ihe ha chọrọ bụ otu esi ewega ya n'ọkwa ọzọ.
Jul 21, 2008 na 9:46 PM
N'ụzọ ụfọdụ, ee. Agbanyeghị, ụmụ akwụkwọ kọleji bụkwa amamịghe na ojiji ha na netwọk ndị a. Ndinam ndudue kiet ke ubiere owo ekeme ndibiat owo enyịn̄ ke ediwak isua ke iso!
Ka anyị nwee olile anya na anyị ga-ahụ usoro ọmụmụ a n'ime afọ ole na ole sochirinụ.
Jul 22, 2008 na 12: 22 AM
Nke ahụ bụ otu ihe m kwesịrị ime karịa bụ ịkparịta ụka n'.ntanet. Enweela m ntanetị n'ịntanetị mana enwere m ike ịmekwu nzukọ ma kelee ndị ọgbọ m na ụwa n'ezie. Aga m achọta ụzọ m ga-esi dabaa ya n'etiti ụlọ akwụkwọ na ọrụ .. ọ ga-enwerịrị n'ezie.
Jul 22, 2008 na 6: 12 AM
Ọ bụrụ na-eji n'ụzọ ziri ezi, ịkparịta ụka n'isntanet bụ nnọọ ike. Site na forums na facebook, achịkọtara m obere otu na-arụkọ ọrụ ọnụ na-eke ngwaahịa maka clickbank. Ya dị ka nkewa nke ọrụ, ebe ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọzọkwa site na ịkparịta ụka n'ingntanet ma ọ bụ iche iche dị ka ụfọdụ na-akpọ ya, ahụmịhe mmụta bụ nke abụọ. Nzukọ na mkparịta ụka / nsogbu na ndị mmadụ na-eti akwụkwọ ọ bụla n'oge ọ bụla n'afọ. Naanị ego 2 m.
Ọkt 27, 2009 na 1:38 PM
ee, ị bụ eziokwu, m na-ahụ anya ihe ole na ole n'ụwa a nwere ike ịgbanwe ihe niile, ndị ahụ bụ otu bụ netwọk na ndị ọzọ bụ otu ọrụ. , ọ bụrụ na ị nọ na netwọkụ ị nwere ohere ịmata mmetụta ndị otu niile na echiche ha, yabụ echiche ndị ahụ niile + nke gị, yabụ ihe ọmụma ga-aba ụba yana otu ihe niile ndị otu nọ na netwọkụ nwere ohere ịbawanye ihe ọmụma ha. dị ike karịa ihe ọ bụla,
Daalụ maka ịkekọrịta otu akụkọ magburu onwe ya nke na-enye m ịkekọrịta echiche m ebe a.
Ọkt 28, 2009 na 9:04 AM
Echere m na ị nwere ike imelite ọkwa gị ebe ọ bụ na IBC gbanwere aha ya na Harrison College.
Aga m ekwu ihe ọzọ banyere ihe m gwara ụmụ akwụkwọ m gbasara ịkparịta ụka n'onlinentanet
Ọkt 29, 2009 na 2:00 AM
Emelitere Thomas! Echere m na ị na-arụ ọrụ dị egwu na-eduga ụmụ akwụkwọ gị site na ihe atụ na mgbasa ozi mmekọrịta na ịkparịta ụka n'socialntanet.